Gandaki Sanchar » बजारमा मास्क पाइन छाड्यो, कोरोनाका नाममा कालोबजारी !
बजारमा मास्क पाइन छाड्यो, कोरोनाका नाममा कालोबजारी !
माघ २६, पर्वत । एकताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा मास्क लगाइरहनु नपर्ने बताएका थिए । यसै साता नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस पीडित चीनलाई एक लाख थान मास्क सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गर्‍यो । तर, अहिले काठमाडौंमा मास्कको हाहाकार भएको छ । बजारमा मास्क सकिएको भन्दै व्यापारीले साधारण मूल्यभन्दा ८ देखि १० गुणा बढी मूल्य उपभोक्तासँग ठटाउन थालेका छन् ।
चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि अहिले त्यसैको बाहानामा नेपाली बजारमा समेत बजारमा मास्कको चरम अभाव भएको हो । किन्ने नै भए ‘ब्ल्याक मार्केट’मा मात्र पाइन्छ । तपाईंले २० रुपैयाँको एउटा मास्कलाई २ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
औषधि व्यवसायीहरुका अनुसार बजारमा पाइने विभिन्न थरीका मास्कमध्ये सबैजसो मास्कको अभाव छ । नेपालमै बन्ने कपडाको साधारण मास्कदेखि पेपर मास्क र विदेशबाट आयात हुने प्रोटेक्टिभ एवं मेडिकल मास्कसम्म सबैखाले माक्सको अभाव देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति २६ माघ २०७६, आईतवार ११:३६